Micro Studio BM-800 Mkpebi | Esi m mac
Micro Studio BM-800, dị mfe, dị ọnụ ala ma na-atọ ụtọ ịmalite
Aga m amalite ọkwa a site na ịkọwa na ọ bụ maka ịhụ uru na ogo nke mic a dị ọnụ ala na-enye anyị. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ chọrọ ịmalite ndekọ ndekọ pọdkastị, ọrụ ndekọ na mfe na ihe ndị yiri ya Micro BM-800 a nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ. Ọ bụrụ, n’aka nke ọzọ, ị bụ onye ọrụ na-achọsi ike nke chọrọ igwe okwu ọkachamara karịa nke nwere ọtụtụ nhọrọ dịka ịchịkwa uru na ndị ọzọ, igwe okwu a abụghị maka gị.
Aga m ebido site n'ịgwa ahụmịhe m na igwe okwu a na eziokwu bụ na enweghị m ike inwekwu obi ụtọ na ogo ọdịyo nke enwetara n'agbanyeghị na ọ dị mfe. N'adịghị ka ọtụtụ ụdị micro ndị ọzọ anyị nwere n'ahịa, nke a bụ maka ndị chọrọ bido na rekọd ma were opekempe na ya. M na-agwa gị na n'ikpeazụ ndị na-atọ ụtọ nke ndekọ na-ejedebe ịhọrọ ụdị ndị ọzọ nke mics iji mee ndekọ ha na ọbụna ịhọrọ maka tebụl na-agwakọta iji melite ogo ọdịyo kachasị. Mana ndị chọrọ ịmalite ma ọ bụ dekọọ ụda site n'oge ruo n'oge adịghị mkpa itinye ego na ya.
Nke a bụ nke m na mgbe ọtụtụ ọnwa dechara a kwa izu Podcast Mụ na ndị ọrụ ibe Nacho Cuesta na Luis Padilla ebe anyị kwurịtara banyere Apple n'etiti ihe ndị ọzọ, ekpebiri m ịhọrọ igwe okwu mana ahapụghị ndụ m na ya. Na mbụ m mere ndekọ a nke pọdkastị na ekweisi nke Apple na-enye na iPhone, EarPods na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha nyere m ezigbo mma na izugbe m chọrọ ịga otu nzọ ụkwụ n'ihu ma ugbu a, m na-eji otu n'ime ndị a. Uni-directional mics na XLR njikọ na otu akụkụ na 3,5 jack na nke ọzọ jikọọ na Mac.
Iji ụdị mic a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịnwe kaadị ọdịyo dị na USB ma ọ bụ njikọ yiri ya (mana ọ bụ iwu na ọ bụrụ na ọ bụ Uni-directional dị ka BM-800 a) na nke m, etu m siri kọwaa na post a. olee ka ịdekọ ọdịyo na Mac, M na-eji ochie kaadị nke a Steelseries Siberia ekweisi nke na-enye m igwe okwu na ntinye okwu n’adabereghị. Mana ọ bụrụ na ịnweghị kaadị ma nwee mmasị na igwe okwu a, echegbula onwe gị, nke a bụ ihe ọ na-ekwu na wikipedia banyere ụdị microzọ otu ụzọ:
Unidirectional ma ọ bụ directionropro microphones bụ ndị na-echebara otu ụzọ na dịtụ ntị chiri ka ndị ọzọ.
Nke a pụtara na n’ihe gbasara BM-800 a anyị agaghị enwe nsogbu n’ihe gbasara enweghi akwụkwọ ọdịyo ma ọ bụ tebụl agwakọta, ebe ọ bụ naanị na ọ ga-ejide olu ma ọ bụ ụda anyị nke sitere n’akụkụ a kapịrị ọnụ. Ọ bụghị na abụ m ọkachamara n'okwu a kama ọ na-achọ mmejọ na ya Achọpụtara m omnidirectionals ma ọ bụ na-akpọ na-abụghị directional, ha uche adịghị iche dị ka mgbanwe nke mmetụta akụkụ nke ụda ebili mmiri na ndị bidirectional ones nke bụ microphones na nduzi abụọ, ya mere nnukwu uche na ntụgharị ihu. Gbaghara ndị ghọtara isiokwu ahụ.
Nkọwapụta BM-800 na Ahịa
N'oge a, enwere m ike ịhapụ nkọwapụta nke igwe okwu ma nye gị ndụmọdụ na nzụta ma ọ bụrụ na ịmalite na ndekọ dị mfe ma ọ bụ naanị achọghị ịhapụ ọgaranya na ịzụta igwe okwu. Ndị a bụ nkọwa nke Micro Studio BM-800:
Oge nzaghachi 20Hz-20KHz
Mmetụta: 45 dB ± 1 dB
Ebu Ahịa: 0.350 n'arọ
XLR njikọ USB na 3,5 jaak
At Kwekọrọ n'Ozizi: Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Windows 98SE, Mac OS, Windows ME
Ọ bụrụ na ị hụchara nkọwa na uru nke igwe okwu a dị mfe ma na-atọ ụtọ ị dị njikere ịzụta ya, Ọ ga-efu gị ihe dị ka euro 15 ịgbanwe ị nwere ike nweta ya ebe ị ga -ahụ ya na agba dị iche iche na mgbakwunye: ọcha, nwa, acha anụnụ anụnụ na pink. O doro anya na ọ bụghị igwe okwu nwere njirimara ọkachamara anyị nwere ike ịzụta maka ụlọ ọrụ na-edekọ ọkachamara, mana enweghị mgbagha n'ihi ọnụ ala ya na karịa arụmọrụ dị mma, ọ dị mma ịmalite ndekọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ngwa » Micro Studio BM-800, dị mfe, dị ọnụ ala ma na-atọ ụtọ ịmalite
Ejikọla m ya na pc na ntinye igwe okwu ma ana m anụ oke ụda mgbe ị na-edekọ, gịnị ka ị kwadoro?
Zaghachi Sergio F
Iji nweta ọtụtụ ihe na igwe okwu a, ọ dị 100% mkpa ịzụta igbe ikike
Zaghachi Robert Puig
Nsogbu nwere ike ịbụ n'ihi ọnọdụ nke micro n'etiti ihe ndị ọzọ. N'okwu m, ihe na-egbochi nsogbu ahụ bụ kaadị ụda USB nke m nwere, kamakwa ịnwa ịbelata olu ntinye site na ntọala nwere ike inyere obere aka. You na-etinye ya kpodoro isi ala dị ka ọ dị na foto dị na igbe ahụ?
ee e, jidere m aka m na-ekwu okwu site n’elu, mana bia, na-ada jụụ ọ na-ede mkpọtụ dị n’azụ
Nsogbu nke igwe okwu ndị a dị ọnụ ala bụ na ịnweghị ike ịhazigharị uru nke otu. Usoro ọgwụgwọ ahụ nwere ike ịbụ ịchọta sọftụwia na - eme mkpọtụ, mana ọ bụrụ na ọ dị ọtụtụ ọ ga - adị mgbagwoju anya.
Aga m ele anya iji hụ ma m ga-ahụ ihe ga-enyere anyị aka na nke ahụ.
Ọfọn, ha na-eme nhọrọ ụda m rụọ ọrụ mkpọtụ mkpọtụ na nhọrọ igwe okwu, ọ dịkwa ka mkpọtụ niile na-ebu, mana ugbu a ọ na-ada ike na-adịghị ike ma dị njọ
Nsogbu ndị a ha nwere site na mkpọtụ mpụga, ruo mgbe olu na-adịghị ike. Ọ bụ naanị n'ihi otu isi, nke na-ekwughị aha ya na isiokwu ahụ. Ma na igwe okwu a chọrọ iji isi iyi 48v.
Ndewo ndị enyi, daalụ maka post ahụ n'ọdịnihu.
Naanị m zụtara igwe okwu a ka m jiri Macbook Pro mee ndekọ ọdịyo, mana amachaghị m banyere ntọala m kwesịrị ịmepụta ma ọ bụ ngwaike m chọrọ iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. N'oge ahụ, amaara m na naanị ijikọ ya na ntinye isi okwu anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ ghọta ya dị ka ụda dị na mpụga na nhọrọ ụda.
Agụla banyere ihe nkwụnye ọkụ (iRig PRE), agbanyeghị na amaghị m ma ọ bụ ya bụ azịza ya.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ihe ọ bụla banyere ya, m ga-enwe ekele maka enyemaka ọ bụla.
Ekele mmadụ niile,
Ndewonu @toni, enwekwara m otu nsogbu. O doro anya na enweghị m ike ịga ije. Ejikọtara m ya na ọdụ ụgbọ mmiri Jack ma ọ nweghị akụkọ banyere ịdị adị ya. Kedu ka i si dozie ya? Daalụ!
Zaghachi Irina Sternik
Otu ajụjụ m zụtara igwe okwu a mana ọ nwere XLR dị ụdọ na USB jack n'ihi na n'akụkụ XLR kama atụdo atọ ọ na-eweta 4. Ọ na-eji batrị dị n'ime ya dị ka m nwere ike isi jikọọ ya na igwekota na ike phantom mana ebee ka Enwetara m eriri dị ka nke a? 4 pin. Onwere onye nwere ihe omuma na emeputa?
Zaghachi Joe Barzz
Ha na-agwa m na mics ndị a na-agba consoles na kaadị ụda. Ọ bụ eziokwu?
Zaghachi Carlos Paredes
Ama m na ọkwa a ochie, mana enwerem ajuju, o dikwa Windows 8?
Apple TV Tech Mkparita maka mmepe ga-abụ na December
Ndị ọrụ beta ọha na eze nwere OS X 10.11.2 beta 3 dị